10 daawadayaasha sawirada ugufiican si loo badalo arjiga Windows 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Daawadeyaasha muuqaalka sawirada ee Windows 10 ayaan caan ku ahayn dadka isticmaala nidaamka. Badanaa, sababtoo ah gaabis ah in la furo sawirada iyo la jaanqaadida qaabab yar. Sidoo kale, howlaha tafatirka ee jira ayaa xaddidan.
Haddii aad raadineyso waxyaabo kale oo barnaamijka ka mid ah, waxaan ku taxnay 10-ka daawade ee muuqaalka bilaashka ah ee bilaashka ah ee laga soo dejisan karo Windows PC-gaaga. Baadhid!
1. Daawade Sawir Degdeg ah
Miisaan khafiif ah oo si fudud loo isticmaali karo, FastStone Image Viewer wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku daawato sawirrada shaashad buuxda, weynaato, oo aragto xogta EXIF Wareejinta galka waxaa lagu sameyn karaa iyada oo loo marayo menu-ka sare. Qalabka waxaa laga heli karaa baarka hoose ee shaashadda.
La jaan qaada daraasiin kordhin, waxay sidoo kale bixisaa shaqooyin tafatir ah. Kuwaas waxaa ka mid ah abuurka, dib u habeynta, ka saarista indhaha cas, iyo hagaajinta laydhka. Sidoo kale waa suurtogal in la sameeyo bandhigyo isdaba-joog ah, lagu dhejiyo qoraallada iyo istiikarada sawirrada, iyo xulashooyinka kale.
Muuqaalka Sawirka FastStone (bilaash): Windows 10, 8, 7, Vista iyo XP.
Winaero waxay leedahay macno ahaan tobanaan shaqooyin loogu talagalay hagaajinta goobaha Windows iyo astaamaha. Iyaga dhexdooda, waxaa jira ikhtiyaar ah in la keeno nidaamka sawir-qaadaha nidaamka muuqaalka ah ee Windows 10.
Si tan loo sameeyo, fur barnaamijka oo raadi Foto sanduuqa raadinta. dhagsii Hel barnaamijyadooda caadiga ah / Firfircoon Sawirka Windows Verr. Kadib u tag Dhaqaaq Sawirka Windows Verr.
Waxaa lagugu geyn doonaa goobaha aasaasiga ah ee arjiga. Dhagsii arjiga lagu qeexay Sawirka Sawirka, iyo liiska muuqda, taga Windows Photo Viewer. Haa, waxay ku jiri doontaa xulashooyinka, sidii maalmihii hore.
Winaero Tweaker (bilaash): Windows 10, 8 iyo 7
3. Sawirka Sawirka
Mid ka mid ah barnaamijyada isku xirnaanta ugu fiican liistadayada. ImageGlass wuxuu bixiyaa ilo loogu talagalay kuwa raadinaya sawir-qaade muuqaal wanaagsan, oo aan lahayn waxyaabo dheeri ah. Codsiga ayaa kuu oggolaanaya inaad ku wareejiso sawirka si qumman oo qumman, iyo sidoo kale inaad hagaajiso ballaca, dhererka ama aad shaashada oo dhan qabsato
Waxaad sidoo kale xiriirin kartaa kordhinta tifaftireyaasha muuqaalka gaarka ah, tusaale ahaan, kaliya ka fur PNG gudaha Photoshop. Waxa kale oo aad dooran kartaa inaad muujisid qolka toolbar, thumbnail, iyo mugdiga ama asalka jeegga.
Barnaamijku wuxuu ku taageeraa faylasha in ka badan 70 qaab, sida JPG, GIF, SVG, HEIC, iyo RAW.
SawirkaGlass (bilaash): Windows 10, 8.1, 8, SP1, 7
Iftiin, dhakhso iyo shaqeyn waa ereyo qeexi kara JPEGView. Codsigu wuxuu muujiyaa sawirka, oo leh bar-gacmeedka leh astaamo yar yar oo hufan. Waxaa la soo bandhigayaa oo kaliya marka jiirku uu dul wareegayo shaashadda hoosteeda. Macluumaadka ku saabsan sawirka, oo ay ku jiraan histogaraam, waa la daawan karaa adigoo gujinaya xarafka i.
Hadaad tilmaanta hoos udhaqaajiso, xulashooyinka tafatirka qaarkood oo xiiso leh ayaa lasoo bandhigayaa. Dhexdooda, isbarbardhiga, dhalaalka iyo aaladda hagaajinta dhererka, isbeddelada hooska iyo cilladda Waxay taageertaa JPEG, BMP, PNG, WEBP, TGA, GIF iyo qaabab TIF ah.
JPEGView (bilaash): Windows 10, 8, 7, Vista iyo XP
5. 123 Sawir Qaade
123 Photo Viewer wuxuu u taagan yahay taageeradiisa qaababka ay adagtahay in laga helo dadka kale ee daawada sawirada ee Windows, sida LIVP, BPG iyo PSD. Codsigu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku dhaweyso hal guji oo uu leeyahay tuuryo kumbuyuutareed si sahlan loo isticmaalo.
Intaa waxaa dheer, waxay leedahay shaqooyin kala duwan oo tafatir ah sida miirayaasha, isku-darka sawirka, iyo galinta qoraalka. Barnaamijku wuxuu kaloo taageeraa fidinta animation, sida GIF, APNG, iyo WebP. Khasaaraha kaliya ee jira ayaa ah inuu la macaamilo xayeysiinta nooca lacag bixinta ee shaashadda guriga.
123 Sawir Qaade (bilaash): Windows 10 iyo 8.1
IrfanView waa daawade miisaan fudud, si fudud loo isticmaali karo oo leh badhanno si fudud looga geli karo daabacaadda, qayb ka mid ah sawirka, iyo daawashada macluumaadka EXIF. Barnaamijku wuxuu leeyahay shaqo qaab beddelid qaab ah, sida PNG iyo JPEG si fudud.
Waxa kale oo aad ku dhejin kartaa calaamadeyn, waxaad ku dari kartaa xuduudaha, waxaadna sameyn kartaa sixitaanka midabka. Wali iyadoo la tixraacayo tafatirka, isticmaaluhu wuu xajmi karaa oo wuu rogi karaa feylka, wuxuu dalban karaa miirayaasha iyo saamaynta, xitaa wuxuu midab kale ugu beddeli karaa mid kale.
Barnaamijku ma noqon karo mid dareen leh kuwa aan khibrad u lahayn tafatirka. Sidoo kale, si aad ugu isticmaasho Boortaqiiska, waxaad u baahan tahay inaad soo dejiso oo aad ku rakibto xirmo luqadeed oo laga heli karo bogga soo-saaraha. Laakiin hawshu waa dhakhso.
IrfanView (bilaash): Windows 10, 8, 7, Vista iyo XP
Xirmooyinka luqadda IrfanView
XnView waa ikhtiyaar sawir qaade kale oo la socda dhowr astaamo dheeri ah. In kasta oo aysan ahayn mid ka mid ah xulashooyinka saaxiibtinnimo marka la eego adeegsiga, haddana waxay ku habboon tahay in ka badan 500 qaab oo waxay u oggolaanaysaa falalka dufcadda. Inta udhaxeysa iyaga, dib u magacaw oo badal feylal badan hal mar
Waxaad sidoo kale qiyaasi kartaa oo aad jarjari kartaa sawirrada, ku sawiri kartaa iyaga, oo aad ku sixi kartaa indhaha cas. Waxaa sidoo kale jira suurtagalnimada in la isku hagaajiyo dhinacyada sida dhalaalka, isbarbardhiga, dhererka, hooska, iyo kuwa kale
XnView (bilaash): Windows 10 iyo 7
Khafiif ah oo si fudud loo isticmaali karo, HoneyView wuxuu muujiyaa astaamaha aasaasiga ah ee laga filaayo sawir qaadaha. Taasi waa, kor u qaad oo dibedda, wareeji sawirka una aad dhanka xiga ama dib ugu noqo kii hore.
Macluumaadka EXIF ​​waxaa si dhakhso leh looga heli karaa badhanka bidix ee kore ee shaashadda. Ka sokow haysashada qaab beddelidda qaab muuqaal ah, barnaamijku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad daawato feylasha isku-dhafan adigoon hoos u dhigin.
Honeyview (bilaash): Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista iyo XP.
9. reer guuraa
Nomacs wuxuu leeyahay muuqaal u eg kan caadiga ah ee daawadayaasha sawirrada ee Windows. Sidaa darteed, qof kasta oo jecel barnaamijka Microsoft waa inuusan dhib kala kulmin adeegsiga codsigan. Sida muujinta lafteeda, waxay kuu ogolaaneysaa inaad si fudud ugu bedesho qaabka u dhexeeya shaashadda buuxda, 100% ama bilowga ah.
Sidoo kale waa suurtogal in la rogo, la cabiro oo la gooyo sawirka iyadoo la adeegsanayo badhannada la iftiimiyay. Software-ka sidoo kale wuxuu bixiyaa aalado kaladuwan oo tafatir ah sida hagaajinta dhererka, abuurista astaamaha PC, iyo inbadan.
reer guuraa (bilaash): Windows 10, 8, 7, Vista, XP iyo 2000
10. Sawirrada Google
Daawadaha kaliya ee khadka tooska ah kagajira liistadayada, Sawirrada Google waxaa laga yaabaa inay yihiin xulashada kuwa jecel inay faylalka oo dhan ku wada hayaan hal meel. Codsiga moobiilka wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si otomaatig ah u kaydiso sawirrada ugana soo gasho biraawsarka.
Haddii aad rabto, waxaad sidoo kale geyn kartaa sawirrada ku keydsan kombuyuutarka iyo Google Drive nooca barnaamijka ee bogga. Adeeggu wuxuu leeyahay mowduuc iyo goob goob iyo qalab tafatir fudud. Waxa kale oo ay leedahay shirar toos ah iyo xusuusyo isla maalintaas ah sannadihii hore.
Maxay caqabad ku noqon kartaa qaar ka mid ah baahida loo qabo isku xirnaanta internetka si loo isticmaalo.
Sawirrada Google (bilaash): Web
Deji sawir-qaadaha cusub ee muuqaalka ah
Windows wuxuu qeexayaa barnaamijka nidaamka asalka ah ee daawadaha caadiga ah. Taasi waa, waxaa loo isticmaali doonaa in lagu furo dhammaan sawirada si otomaatig ah. Si aad ugu beddesho barnaamijka la soo dejiyey, si fudud u raac tallaabooyinka hoose:
1. Xuquuqda-u-riix sawir, iyo menu-ka furmaya, guji Ku fur;
2. Inbadan oo aad daawaneysid bandhigga liiska lasoo bandhigay, dooro Xulo codsi kale;
3. Kahor intaadan gujinin astaanta barnaamijka, calaamadee sanduuqa ku xiga Had iyo jeer isticmaal tan codsi si loo furo faylasha .jpg (ama wax kastoo dheereynta sawirka);
4. Haddaba, guji barnaamijka oo xaqiiji on Okay.
Haddii aadan heli karin magaca barnaamijka, hoos ugu rog liiska oo aad Barnaamijyo badan. Haddii aadan wali helin, dhagsii Ka raadi codsi kale PC-gaan. Sanduuqa furmaya, ku qor magaca barnaamijka baarka baaritaanka.
Markaad hesho, dhagsii ka dibna badhanka Furan. Kadib ku celi talaabooyinka kor ku xusan, arjiga waxaa lagu dari doonaa xulashooyinka dalabka.
Ciyaartoy fiidiyow oo heer sare ah oo loogu talagalay PC iyo Mac